Neck Stretches - Basic Exercises Iwe Unofanira Kuziva | Bezzia
Nhasi zvinopfuura kudzidziswa pachezvayo, tiri kuzorega isu tichitorwa nhevedzano ye mutsipa kurovedza kana kutambanudza. Nekuti sekuziva kwedu zvakanaka, ndeimwe yenzvimbo dzakaomarara, dzinogona kutambura zvakanyanya. Kurwadziwa kwemutsipa kana kunyangwe dzungu nekuda kwechikonzero ichi ndiwo marongero ezuva muhupenyu hwedu.
Naizvozvo, kana zviri mumaoko edu kuzvidzivirira kana kuzvivandudza, hapana zvirinani. Naizvozvo, isu tinofanirwa kuyeuka kuti zviripo nhevedzano yekurovedza iyo yatichakwanisa kuzorodza nayo mutsipa zvakanyanya. Sezvo mamwe matambudziko emuchibereko ane hukama nezvibvumirano. Totanga here?
1 Mutsipa wekupedzisira unotambanudza
2 Smooth musoro unotendeuka
3 Inotambanudza mutsipa uye tucks chirebvu
4 Iyo musana inodawo kutambanudzwa
Mutsipa wekupedzisira unotambanudza
Ichi chiitwa ndechimwe chezvinyanyo kuzivikanwa uye nekuwedzera, isu tinogona zvakare kuchiwana nenzira dzakasiyana. Mumwe wavo ndechekuti tinogona kuzviita takagara, tichisiya maoko pasi nemapfudzi zvakare. Kana tikaita simba shoma munzvimbo mbiri idzi, zvirinani. Panguva iyoyo iwe unofanirwa kukomberedza mutsipa wako padivi, sekunge nzeve yako yaida kubata bendekete. Zvakakosha kuti usambozvimanikidza uye kuti uite iro zvinyoro nyoro. Iwe uchazviita kurudyi uyezve kuruboshwe kana zvinopesana.
Ehe saizvozvo Imwe misiyano yeiyi yakatambanudzwa yemutsipa kuzviita nerubatsiro rweruoko. Panzvimbo pekusiya maoko pasi, tinobata musoro neruoko kudivi kwatinoda kutambanudza. Ipapo isu tichagara masekondi mashoma seichi kuti tichinje kune rimwe divi. Usashandise kumanikidza kwakanyanya neruoko rwako kana, zvinongobatsira chete.
Smooth musoro unotendeuka
Tinogona zvakare kusiyanisa maekisesaizi kana kutambanudzira mutsipa pamusoro neiyi. Iyo yakapusa nekuti une sarudzo yekugona kuzviita zvese wakagara uye wakamira. Muzviitiko zvese izvi, chinzvimbo chekutanga chakafanana nekuti isu tinofanirwa kuve nemaoko edu pasi nemapfudzi edu zvakare. Kamwe wagadzirira, inguva yekudzungudza musoro. Ndokunge, tichaita kutendeuka kune rimwe divi uyezve kune rimwe racho. Zvese izvi nenzira inononoka kudzivirira dzungu risingadiwe. Iyo inzira yakakwana yekumisikidza mhasuru dzenzvimbo yetrapezius.
Inotambanudza mutsipa uye tucks chirebvu
Zvingave zvishoma sei, isu takatarisana neimwe yedzakareruka kurovedza muviri kuti tiite. Ndezvekuchengetedza muviri wakatwasuka, ndiko kuti, chikamu chechipfuva hachigone kufamba. Kubva ipapo, chii chichafamba mutsipa nechirebvu. Nekuti tichaita kumberi kwemutsipa kufamba. Isu tinofungidzira kuti tine tambo yerabha uye tinoda kuitwasanudza kure kumberi sezvinobvira, asi kwete pasi. Ive nekuchengera kuti usafambise iyo yasara yemuviri. Kana tamboitwasanudza, inguva yekunhonga mutsipa uyo uye tichazviita neshure tichisiya chirebvu chinamatira zvachose pairi.
Iyo musana inodawo kutambanudzwa
Kunyangwe isu tichitarisa pachikamu chemutsipa, ichokwadi kuti musana wakabatanidzwawo uye unoda kuti isu tizvifunge. Kune akawanda maekisesaizi atinogona kumuitira, asi mune ino kesi zvatichaedza ndezvekuti kufamba kwakabatana uye kwakagadzirirwawo mutsipa wedu. Nekudaro, iwe unofanirwa kunyatsoita mushe. Mune mamwe mazwi, sekunge tambo yaive ichikwevera musoro wako kumusoro kwauri. Mune ino kesi isu tinoda kutambanudza musana nemutsipa asi zvese pasina kumanikidza, kunyangwe zvakanyanya isu tichigona kuita zvirinani. Ipapo isu tinozorora uye tinodzokera kunzvimbo yekutanga. Mutsipa unoenda wakananga uye kune izvo, chirebvu chinodzika zvishoma senge iwe uchida kumaka chirebvu chechipiri. Wakawana here? Wobva waita zvakati wandei uye uchaona shanduko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Exercise » Exercises uye anotambanudzira kune mutsipa